Kufuneka uyazi sheet metal ngokuqhelekileyo kusetyenziswa ulwahlulo ipleyiti steel stainless, umlinganiselo, ukuguqulwa ixabiso
Malunga nepleyiti yensimbi engenasici: ngoku sinqabile kakhulu ipleyiti yentsimbi yoqobo, kodwa ngenxa yomthamo wayo omkhulu, iindleko eziphakamileyo, ubunzima bokuchola, akukho lula ukuthutha kunye nezinye izizathu, imarike ibonwa kakhulu yintsimbi yentsimbi ethambileyo. . Isetyenziswa ngokuqhelekileyo intsimbi engatyiwayo ...
Ngaba i-304 insimbi engenastainless iyafana nebakala lokutya 304 intsimbi engatyiwayo?
304, luhlobo lwentsimbi engatyiwayo, igama laseMelika. Igama layo lesiShayina liyi-06Cr19Ni10, enzima kakhulu kwaye kunzima ukuyifunda, ngoko sikhetha ukuyibiza ngokuthi "i-304 insimbi engenasici". Ngaba i-304 insimbi engenastainless iyafana nebakala lokutya 304 intsimbi engatyiwayo? Akunjalo! Ibakala lokutya...
Kutheni kufuneka ukwahlula intsimbi eshushu eqengqelekayo kunye nentsimbi eqengqelekayo ebandayo, ibe yintoni umahluko?
Zomibini i-hot rolling kunye ne-cold rolling ziyi-steel plate okanye iinkqubo zokwenza iprofayili, zinempembelelo enkulu kwisakhiwo kunye neempawu zentsimbi. Ukuqengqeleka kwentsimbi ubukhulu becala kukuqengqeleka okushushu, ukuqengqeleka okubandayo kudla ngokusetyenziswa kuphela ukuvelisa intsimbi encinci kunye nentsimbi yeshiti kunye nezinye intsimbi echanekileyo. Iqhelekile c...
Indlela yokwahlula izinto zeplate yentsimbi ye-Q235 kunye ne-Q345?
Imbonakalo ye-Q235 kunye ne-Q345 ngokuqhelekileyo ayibonakali. Ukwahlukana kombala akunanto yakwenza nezinto zentsimbi, kodwa umahluko kwindlela yokupholisa emva kokuba intsimbi ikhutshwe. Indawo eqhelekileyo, epholile ngokwendalo ibomvu. Ukuba kusetyenziswe indlela yokucima, umphezulu wenza inkomo eshinyeneyo ...
I-Q235 ipleyiti eshushu eqengqelekayo yentsimbi kunye nentsimbi ebandayo eqengqelekayo umahluko
Ubunzima bepleyiti yentsimbi eshushu eqengqelekayo buphantsi, ukusetyenzwa lula, i-ductility ilungile. Cold rolled sheet ubulukhuni iphezulu, processing kunzima noko, kodwa akukho lula deformation, amandla aphezulu. Amandla epleyiti eqengqelekayo ashushu aphantsi, umgangatho womphezulu uphantse waphantse (ukugqiba kwe-oxidation ephantsi), kodwa iiplas ezilungileyo...
Uyawazi umahluko phakathi kwepleyiti eqengqelekayo ebandayo kunye nepleyiti eqengqeleyo eshushu yeshiti lentsimbi? Ungaqhathwa!!!
ngu admin on 21-10-09
Umphezulu wepleyiti eqengqelekayo ineglosi ethile kwaye ivakala igudile, efana nekomityi yentsimbi eqhelekileyo esetyenziselwa amanzi okusela. 2. Ukuba i-plate edibeneyo eshushu ayinayo i-pickled, ifana nomgangatho weentsimbi ezininzi eziqhelekileyo kwiimarike. Umphezulu omhlwa ubomvu, kwaye umphezulu une...
Indlela yokujonga intsimbi yangoku yaseTshayina?
I-China ivelisa i-1 yebhiliyoni yeetoni zentsimbi ngonyaka, i-53% yetotali yehlabathi, nto leyo ethetha ukuba ihlabathi liphela xa lidityanisiwe livelisa intsimbi encinci kune-China. Isinyithi sisixhobo esibalulekileyo semveliso. Sidinga intsimbi yokwakha izindlu, iimoto, oololiwe abahamba ngesantya esiphezulu kunye neeBridges. Ngo-2019, uMkhosi waManzi waseTshayina...
Ijika njani intsimbi ibe yintsimbi? Isinyithi sesinyithi sikuhambisa kuyo yonke into Ijikwa njani intsimbi ekrwada ibe yintsimbi?
Intsimbi evela kwintsimbi yokuqala yentsimbi, ngokunyibilikisa ngokuqhubekayo, ukuqengqeleka, unyango lobushushu kunye nokulungiswa koomatshini, ekugqibeleni ufumane imveliso egqityiweyo. Masiqonde inkqubo yokuvelisa intsimbi kunye: Inkqubo yokuvelisa isinyithi - inkqubo yokwenza i-steelmaking Coking inkqubo yokuvelisa ipro...
Shandong Kunda Isakhiwo Steel Team
Kukwindla entle yokuqala, iShandong Kunda Steel Co., Ltd. ingenise uqeqesho lophuhliso lomgangatho kule kota. I-Shandong Kunda Steel Co., Ltd. inembali ye-7 iminyaka. Ngokuqonda okunzulu kwimarike yensimbi, sinokubonelela abathengi ngeengcali kunye ne-hi ...
I-China irhoxisa isaphulelo serhafu sokuthumela ngaphandle kwentsimbi
ngu admin on 21-08-04
Ngomhla woku-1 ku-Agasti 2021, urhulumente wakhupha umgaqo-nkqubo wokurhoxisa isaphulelo serhafu sokuthumela ngaphandle kwentsimbi. Uninzi lwababoneleli bentsimbi baseTshayina babethwa. Bejongene nomgaqo-nkqubo wesizwe kunye nemfuno yabathengi, baye beza neendlela ezininzi. Ukucinywa kwesaphulelo serhafu kubangele ukonyuka kweendleko zemveliso yase China...
I-Shandong Kunda Steel Co., Ltd. ine-inventory enkulu yeepleyiti zetsimbi, ezinokucutshungulwa, zinqunywe, kwaye zipakishwe ngokuthunyelwa rhoqo ngolwandle. Sinoomatshini abaninzi bokusika, oomatshini bokucaba, kunye noomatshini bokuqhumisa isanti ukuhlangabezana neemfuno zakho ezahlukeneyo. Singakwazi ukususa umhlwa...
Shandong Kunda Steel Co.,Ltd. Ifakwe kwisixeko saseLiaocheng, kwiphondo laseShandong, esisixeko esihle sithweswe isithsaba njenge-Oriental Venice. I-Liaocheng kwintshona yephondo laseShandong, i-200Km eMzantsi ukusuka kwisiXeko saseBeijing, i-100Km ngasentshona ukusuka kwiJinan City.Jiqing Expressway ukuwela isixeko ukusuka eMpuma ukuya eNtshona; Beijing...
Kufuneka uyazi sheet metal edla ngokusetyenziswa ibala...
Ngaba 304 steel stainless efanayo ukutya g...
Kutheni kufuneka uhlukanise intsimbi eshushu eqengqelekayo kunye...
Ukwahlula njani imathiriyeli yepleyiti yentsimbi Q...
I-Q235 ipleyiti yentsimbi eshushu eqengqelekayo kunye nomqulu obandayo...
Idilesi: I-2F, iSakhiwo seHlabathi sanamhlanje, iSithili saseDongchangfu, eLiaocheng, eShandong, eTshayina